ၿဖိဳးျပည့္စုံနဲ႔အတူ အဖမ္းခံရတဲ့ ေလးဘာသာဂုဏ္ထူး ရွင္ ညီေလး ၿငိမ္းခ်မ္းကို ဆိုတာ…. - Myitter
ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးျပားလို႔ ယူဆရတဲ့ အျပား ၁၁ ျပားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး ဒါဟာ မူးယစ္ေဆး ဟုတ္မဟုတ္ကိုေတာ့ ဓာတုေဗဒေဆးစစ္ခ်က္ေတြရမွသာ အတည္ျပဳနိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအထဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၿဖိဳးျပည့္စုံနဲ႔ အတူ အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့ လူငယ္ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးကေတာ့ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရၿပီးေတာ့ ၊ သူဟာ ေလးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ျဖစ္သလို ၊ ေဆးလိပ္ပင္ မေသာက္တတ္သူျဖစ္တယ္လို႔လည္း နီးစပ္ရာ အသိုင္း
ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး သံသယရွိမႈနဲ႔ စစ္ေဆးထားၿပီးေဆးစစ္ခ်က္ အတည္မျပဳနိုင္ေသးခင္အထိေတာ့ အမႈဟာ တရားစြဲဆိုင္နိုင္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိမွာေတာ့
ပရိသတ္နဲ႔ တကြ ၊ အႏုပညာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ၿဖိဳးျပည့္စုံ နဲ႔ လူငယ္ေလးႏွစ္ဦးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးလၽွက္ရွိေနၾကပါတယ္။
ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့အတူ အဖမ်းခံရတဲ့ လေးဘာသာဂုဏ်ထူး ရှင် ညီလေး ငြိမ်းချမ်းကို ဆိုတာ….
လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်အပါအဝင် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေပန်းစားသွားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ လူငယ်လေးနှစ်ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးသံသယရှိမှုနဲ့ လူမြင်ကွင်း မြန်မာပလာဇာမှာ လက်ထိပ်ခပ် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မူးယစ်ဆေးပြားလို့ ယူဆရတဲ့ အပြား ၁၁ ပြားကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ဒါဟာ မူးယစ်ဆေး ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ ဓာတုဗေဒဆေးစစ်ချက်တွေရမှသာ အတည်ပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ သရုပ်ဆောင် ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ အတူ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ လူငယ်နှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးကတော့ ကို ငြိမ်းချမ်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီးတော့ ၊ သူဟာ လေးဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် ဖြစ်သလို ၊ ဆေးလိပ်ပင် မသောက်တတ်သူဖြစ်တယ်လို့လည်း နီးစပ်ရာ အသိုင်း
အဝိုင်းတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ အတူတွဲသွားလာပြီး သီချင်းရေး ဂီတအလုပ်တွေ လုပ်နေတာကို မနာလိုသူတွေက အခုလိုပဲ တမင်အကွက်ဆင် ချောက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး သံသယရှိမှုနဲ့ စစ်ဆေးထားပြီးဆေးစစ်ချက် အတည်မပြုနိုင်သေးခင်အထိတော့ အမှုဟာ တရားစွဲဆိုင်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိမှာတော့
ပရိသတ်နဲ့ တကွ ၊ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ လူငယ်လေးနှစ်ဦးအတွက် ဆုတောင်းပေးလျှက်ရှိနေကြပါတယ်။